Soomaalida Iswiidhan oo siminaar labbo cishe qaatay ugu soo dhamaaday Trollhättan | Somaliska
Magaaladda Trollhättan ee duleedka magaaladda Göteborg ee dalkaan Iswiidhan, waxaa maalintii shalay aheyd oo axad ah ku soo idlaaday siminaar labbo cishe qaatay oo loogaga hadlayey arrimaha soomaalida gaar ahaan degmadaas oo mudooyinkii ugu dambeeyey ay ka dhaceen falal carruuro soomaali ah oo gaaraya 12 lugu qaatay.
Aqoonyahanno kala duwan oo ka kala yimid daafaha kala duwan ee dalkaan Iswiidhan oo halkaasi ka soo jeediyey mowduuco kala duwan oo la xirriira soomaalida Iswiidhan, warbixino iyo muhiimadda ay leedahay wada jirka ayaa si weyn u soo jiitay dareenka dadweynihii u oomanaa hadaladda wax-galka ah ee aqoonyadda soomaalida Iswiidhan.
Cabdirisaaq Awees oo ka mid ah dhalinyaradda ee maalintii labaad halkaas ka hadlay ayaa la wadaagay bulshadda dareenkiisa la xirriira waayo aragnimadda uu ka soo qaaday wado ay in badan oo dhalinyaradda soomaalida Iswiidhan ah bartanka kaga dhaceen taas oo ah maandooriyaha. Waxa uu sheegay in wado halis ah oo naftiisa ku waayi lahaa ka soo laabtay, isagoo misna dhinaca kale xusay in badan oo saaxiibadiisa ah ay maanta ifka saarneyn ka dib markii la dilay. Wuxuu yiri:
“Maalin ayaa gabar ii timid oo itiri waxaan rabaa inaan iibiyo maandooriye, waxaan waanin jiray oo aan inta badan la hadli jiray wiilasha, hadase markeey gabadhan igu tiri waxaan doonayaa inaan maandooriye iibiye waan naxay oo waaga ayaa igu baryayey. Markii aan iri waxaad tahay gabar wanaagsan oo dugsiga sare dhameeysay maxeey tahay sababta aad wado xun u rabto inaad gasho, waxeey ii sheegtay in ay raadsatay in ka badan 50 shaqo, mid ka mid ahina aan loo soo jawaabin. Taana waa mid loogu eegayo xaafadda ay deegaan ahaan ka soo jeeddo ee ah Rinkeby. Ugu dambeyntii waxaa suuragal ii noqotay in aan gabadhii ka waaniyo fikirka qaladan ee ay aaminsaneyd maantana waa gabar nagala shaqeeysa howlaha baraarujinta dhalinyaradda” ayuu yiri Cabdirisaaq oo ka tirsan xurrurta SIG (Kooxda dar dargelinta bulshadda).
Dhinaca kale barafeeysar C/qaadir Ruumi oo ka mid ah aqoonyahanadda Akadeemiye goboleedka afka soomaaliga ee AGA, oo kulankaas isna ka hadlay ayaa ka waramay waxyaabaha keena in carruuraha soomaalida qurbaha lugu gurubsado ama lugu qaato.
Wuxuu sheegay in arrimaha ay ka mid yihiin dayaca waalidku dayaco carruurta, dilka xagga maskaxda iyo korka ah, caafimaad darro ku timaada waalidka iyo kufsiga loo geeysto ay yihiin waxbaaha ugu weyn ee keena qaadasha carruuta, gaar ahaan dayaca, dilka oo ah kuwa ugu badan ee qoysaska soomaalida loogaga qaato carruurahooda. Ugu dambeyntiina kulankan oo ahaa mid aqoon isweydaarsi iyo isu gudbin warbixino oo ay soomaalida Trollhättan qabato ayaa ah kii ugu horeeyey ee noociisa ah lugu qabto, iyadoo sidoo kalena ay waalidiintii carruuraha laga qaatay ku sugnaayeen goobta kana hadleen dareenkooda la xirriirta arrinkaas. Wuxuu ku soo dhamaaday jawi aad u wanaagsan.
Magaaladda Stockholm: Xaafadda Rinkeby oo yeelaneeysa xarrun boolis